MCBackup - ကျွန်ုပ်၏ဆက်သွယ်ရန် Backup | Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » MCBackup - ငါ့ဆက်သွယ်ရန် Backup ကို
MCBackup - ကျွန်ုပ်၏ဆက်သွယ်ရန် Backup APK
My Contacts Backup သည်သင်၏အဆက်အသွယ်များကိုသင့်ဖုန်းမှကွန်ပျူတာသို့အလိုအလျောက်မလိုဘဲအလိုအလျောက်ပြန်လည်ရယူရန်အတွက်အလွယ်ဆုံးနည်းဖြစ်သည်။ သင်၏အဆက်အသွယ်များအားလုံးကိုတစ်ချက်တည်းဖြင့်အရံသိမ်း။ အီးမေးလ်ဖြင့် .vcf ပူးတွဲဖိုင်တစ်ခုအဖြစ်သင်ပို့နိုင်သည်။
အဆက်အသွယ်များအားလုံးကိုသင်၏စာတိုက်ပုံး၌ .vcf ဖိုင်ကိုဖွင့်ရုံဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအလွယ်တကူပြန်ယူနိုင်သည်။
* အော့ဖ်လိုင်း Backup ။ မည်သည့်ဆာဗာနှင့်မျှထပ်တူပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ အရန်ကူးဖိုင်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်အီးမေးလ်ပို့ပါ။
* သင်၏လိပ်စာစာအုပ်သည်လုံခြုံပြီးလုံခြုံပါသည်။ သင်၏အဆက်အသွယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လှမ်းမမှီပါ။
ပြန်လည်လွယ်ကူစွာပြန်ယူပါ။ Backup ဖိုင်ကိုပြန်လည်ရယူရန်မည်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းမှမလိုအပ်ပါ။ Android mail client ရှိ * .vcf backup ဖိုင်ကိုသာနှိပ်ပါ။
Android Device များအကြားရှိအဆက်အသွယ်များကိုအီးမေးလ်ဂလိုင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
* USB ကြိုးမှတစ်ဆင့်ကူးယူထားသောဖိုင်ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာထဲသို့ကူးယူပါ။
* သတိရစေခြင်းကိုပုံမှန် (အပတ်စဉ်သို့မဟုတ်လစဉ်) ပုံမှန်သိမ်းဆည်းထားပါ
* အဆက်အသွယ်များကို VCF (VCard) အနေဖြင့်အရန်ကူးထားပါ
အရေးကြီးမှတ်ချက် - backup ဖိုင် (* .vcf) ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပေးပို့ပြီးသည့်နောက်၊ မက်ဆေ့ခ်ျရောက်ရှိလာပြီးပူးတွဲပါ (အရန်ကူးထားသောဖိုင်) ပါရှိပါကသင်၏ inbox ကိုစစ်ဆေးပါ။ ပူးတွဲဖိုင်အရွယ်အစားကြီးမားလွန်းပါကတစ်ခါတစ်ရံတွင်အီးမေးလ်ပံ့ပိုးသူများကပူးတွဲဖိုင်များကိုပိတ်ဆို့ပါသည် သင်၏မိတ္တူကူးယူရန်ဖြစ်နိုင်လျှင်အခြားမေးလ်အကောင့်တစ်ခုဖြင့်ကြိုးစားပါ။ သိုမဟုတ်သိုမဟုတ် SD Card တွင်မိတ္တူကူးပွားထားသောဖိုင်ကို USB ကြိုးမှတဆင့်သင့်ကွန်ပျူတာသို့ကူးယူပါ။
လက်ရှိ CURRENT VERSION: 1.0.2
မJohnဲ Johnston says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 10, 2014 မှာ 11: 32 ညနေ
အပလီကေးရှင်းမှအီးမေးလ်ပို့ရန်အတွက်အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုမည်သို့ဖွဲ့စည်းရမည်ကိုရှင်းပြရန်လမ်းညွှန်ချက်များအဘယ်ကြောင့်မရှိသနည်း ???? ဤသည်မှာကျွန်ုပ်အီးမေးလ်တစောင်ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်ရရှိသောသတင်းစကားဖြစ်ပြီး၊ ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အထောက်အပံ့မျှမပါရှိပါ။ အက်ပလီကေးရှင်းစတင်ဖွင့်သောအခါအီးမေးလ်အဆက်အသွယ်အခြေအနေသို့ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်နောက်မှလမ်းညွှန်ချက်များမရှိပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုဤအကူအညီဖြင့်ကူညီနိူင်မည်ဆိုပါကသူတို့၏ယူဆချက်ကကျွန်ုပ်ကိုသောင်တင်နေစေသည်။ သို့မဟုတ်ပါကအခြားအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုကြိုးစားစမ်းကြည့်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မ
အောက်တိုဘာလ 23, 2014 မှာ 9: 36 ညနေ
ကိုယ့် Samsung Note3 ကိုသုံးပါတယ်။ ငါစက်ရုံပြန်ရောက်တဲ့အခါငါအဆက်အသွယ် usine mc backine ကို back up လုပ်တယ်။ ထို့နောက်မေးလ်ကိုဖွင့်ပြီး၊ ၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ပူးတွဲပါ MCBackup.vcf ဖိုင်ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်၎င်းကို အသုံးပြု၍ ပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုသည်။ ငါအဆက်အသွယ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သို့သော်“ vCard ကိုတင်သွင်းရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ?
သြဂုတ်လ 7, 2014 မှာ 8: 33 ညနေ
အဆက်အသွယ်မိတ္တူကူး, ငါ့ gmail အကောင့်ဓာတ်ပုံ။
sanath priyadarshana says:
ဇွန်လ 30, 2014 မှာ 11: 50 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2014 မှာ 7: 58 ညနေ
ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းအဟောင်းသည် XPERIA TX ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏အက်ပ်နှင့်အဆက်အသွယ်များကိုအရန်ကူးယူပြီး MCBackup.vcf ဖိုင်ကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်စာတိုက်ပုံးသို့ပို့ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ် MOTO G မှမေးလ်ကိုဖွင့်ပြီး၊ ၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ပူးတွဲပါ MCBackup.vcf ဖိုင်ကို နှိပ်၍ ၎င်းကိုပြီးပြည့်စုံစွာလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ငါအဆက်အသွယ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သို့သော်“ vCard ကို တင်၍ မရပါ။
ဇူလိုင်လ 2, 2014 မှာ 8: 33 နံနက်